Ny vondrona anay dia manarona faritra 950000 metatra toradroa.
Fambolena zavamaniry manodidina ny 50000 metatra toradroa.
Manana ny serivisy feno momba ny fikarohana siantifika, famokarana, fivarotana ary fametrahana.
Teknolojia lalindalina sy masinina fanaraha-maso mba hahazoana antoka ny kalitao tsara indrindra.
ISO9001: 2000 Fanamarinana.
Xuzhou Double Rings Machines Co., voafetra ho an'ny Golden Moon Group, orinasa matihanina misy vovoka etona, vata entona, boiler rano mafana, boiler elektrika, Autoclave ， Boiler Power Plant, Pipe etona ary fantson-drano mafana sns.
Izy io dia manana boiler Grade A, famokarana sambo tsindry A2 ary mari-pahaizana famolavolana D1 & D2 nankatoavin'ny General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, dia voamarina ho ISO9001: 2000 Quality System Management, ary vondrona C metering.
Notarihin'ny politika momba ny kalitao «Ny kalitao kalitaon'ny kilasy voalohany, ny fikarakarana sy ny fametrahana, ny serivisy aorian'ny varotra sy ny varotra" Ny fananganana sary tsara, avereno hatrany ny filan'ny mpanjifa. fahafaham-po ny mpanjifa.